कोरोनाको प्रकोप – अब ६६ मुलुकबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ७ चैत्र शुक्रबार ०८:४७
कोरोनाको प्रकोप – अब ६६ मुलुकबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध !
कोरोनाको सम्भाव्य प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले यूरोप, पश्चिम एशिया तथा खाडी क्षेत्र लगायत ६६ मुलुकबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो व्यवस्था २०७६ चैत ७ गते मध्यरातदेखि लागू हुनेछ । प्रतिबन्धित देशका नागरिक मात्र होइनन्, त्यहाँ रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपालीलाई समेत नेपाल आउन रोकिनेछ । साथै, प्रतिबन्ध लगाइएका देशलाई ट्रान्जिट बनाएर पनि नेपाल आउन पाइनेछैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा कुल ६६ मुलुकका नागरिक र त्यहाँबाट आउने जुनसुकै मुलुकका नागरिकलाई समेत प्रतिबन्ध लागेको छ ।
सरकारले बुधवार गरेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्स कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यूरोपका ४५ देशबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको छ । पश्चिम एशिया र खाडीका १९ देशका साथै जापान र कोरियाबाट पनि आउन पाइने छैन । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
PREVIOUS Previous post: कोरोना भाइरसबाट चीनमा भन्दा इटालीमा बढी मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार नाघ्यो
NEXT Next post: भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्पताल आजदेखि सञ्चालन हुँदै